မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ တည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို လှပကျော့ရှင်းစွာ တွေ့မြင်ရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် - Zeekwat Hot News
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ တည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားကို လှပကျော့ရှင်းစွာ တွေ့မြင်ရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
July 11, 20190815
အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ မင်းသမီး အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် အထူးမိတ်ဆက် စရာအမလိုပါဘူးနော်။ သူမဟာဆိုရင် အခုဆိုရင် ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သလို အကယ်ဒီဆု ကို လဲ ဆွတ်ခူးရယူထားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။
Source Eaindar Kyaw Zin # Photo Nay Min Htun(Amazing Grace)
သူမက အခုဆိုရင် ကျေပွန်တဲ့အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် သူမရဲ့ အလှတရားတွေ ကတော့ နဂိုအတိုင်း ပါပဲ။ သူမက အခုဆိုရင် ရင်သွေးနှစ်ဦး မွေးထားပေမယ့်လဲ သူမရဲ့ နဂိုကိုယ်ခန္ဓာ အတိုင်းလှမြဲ လှနေဆဲဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ဘယ်လိုများ ၀ိတ်ချထားသလဲဆိုပြီး အရမ်းစိတ်ဝင် စားနေကြပါနော်။
သူမက အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်း မိသားစု အတွက် အချိန်တွေကို ခွဲဝေပေး သူလဲဖြစ် ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုကော နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို သူမအကောင့်မှာ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။
“မနေ့က “Frequency “ ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရှင်ကား press show ကပုံလေးတွေပါ….ဒီကားထဲမှာ ၁၉၁၃ ခုနှစ်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်…ဒါကြောင့် red carpet ကိုလဲဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ရုပ်အတိုင်းလေး ဝတ်ပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်…😊😍 ပွဲမသွားခင်အိမ်မှာ ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပါ ပရိသတ်အတွက် အမှတ်တရ❤️” ဆိုပြီ သူအကောင့်မှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ခန့်မာန်ထည်က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီဇာတ်ကားမှာ ၁၉ ရာစုနှစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ဇာတ်ကားဇာတ်အပိုင်း(၄)ပိုင်း ဆက်လက်ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ပါဝင်ထားပြီး အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်နဲ့ အပြိုင်သရုပ်ထားတယ် လို့လဲသိရပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လာမယ့် ဂျူလိုင်(၁၈)ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုတွေ ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအုံး ပရိသတ်ကြီး။
.ျမန္မာအမိ်ုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ က်က်ေသရရွိရွိ တည်ျငိမ္တဲ့ အလွတရားကို လွပေက်ာ့ရွင်းစြာ တြျေ့မင်ရတဲ့ အျိန္ဒာကေ်္ဇာင်
အောင်ျမင္မှုတြေ သိမ်းပိုက္ထားတဲ့ နိုင်ငံကေ်္မာင်းသမီး ဒိတ္ဒိတ္က်ဲ မင်းသမီး အကယ္ဒမီ အျိန္ဒာကေ်္ဇာင္ကို ပရိသတ်ကြီး အတြက် အထူးမိတ္ဆက် စရာအမလိုပါဘူးနော်။ သူမဟာဆိုရင် အခုဆိုရင် ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင္တစ်ဦျးဖစ်သလို အကယ္ဒီဆု ကို လဲ ဆြတ္ခူးရယူထားသူလျဲဖစ္ပါတယ်။ သူမက အခုဆိုရင် က်ေပြန္တဲ့အိမ်ရွင္မအမ်ိုးသမီးတစ်ဦျးဖစ်ပေမယ့် သူမရဲ့ အလွတရားတြေ ကေတာ့ နဂိုအတိုင်းပါပဲ။ သူမက အခုဆိုရင် ရင်သြေးနွစ်ဦး မြေးထားပေမယ့္လဲ သူမရဲ့ နဂိုကိုယ္ခန္ဓာ အတိုင်းလျွမဲ လွေနဆျဲဖစ္လို့ ပရိသတ်တြေက ဘယ္လိုမ်ား ၀ိတ္ခ်ထားသလဲဆျိုပီး အရမ်းစိတ်ဝင် စားနေကြပါနော်။ သူမက အနုပညာလုပ်ငန်းတြေ ဆက္လက္လုပ္ကိုင်ရင်း မိသားစု အတြက် အခ်ိန်တြေကို ခြဲဝေပေး သူလျဲဖစ္ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရွားမှုကော နေ့စဥ္လှုပ်ရွားမှုပုံရိပ်တြေကို သူမအေကာင့်မွာ ဖော်ျပေလ့ ရွိပါတယ်။ “မေန့က “Frequency “ ကြိမ္နှုန်း ရုပ်ရွင္ကား press show ကပုံလေးတြေပါ….ဒီကားထဲမွာ ၁၉၁၃ ခုနွစ္ကခ်မ်းသာကြယ်ဝတဲ့ အမ်ိုးသမီးတစ်ယောက်အျဖစ္ပါဝင်သရုပ်ဆောင္ခဲ့ပါတယ်…ဒါကြောင့် red carpet ကိုလဲဇာတ္ကားထဲက ဇာတ်ရုပ်အတိုင်းလေး ဝတ်ပြီးတက္ခဲ့ပါတယ်…😊😍 ပဲမြသြားခင်အိမ္မွာ ရိုက္တဲ့ပုံလေးတြေပါ ပရိသတ်အတြက် အမွတ္တရ❤️” ဆျိုပီ သူအေကာင့္မွာ တင္ထားတာတြေ့ရပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရွင္ဇာတ္ကားကြီးကို ဒါရိုက္တာ ခန့်မာန္ထည္က ရိုက္ကူးထားတျာဖစ်ျပီး အဲဒီဇာတ္ကားမွာ ၁၉ ရာစုနွစ် အမ်ိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အျေခခံရိုက္ကူးထားတျာဖစ္ပါတယ်။ အဲဒီရုပ်ရွင္ဇာတ္ကားကြီးကို နောက်နွစ်တြေမွာလဲ ဇာတ္ကားဇာတ်အပိုင်း(၄)ပိုင်း ဆက္လက္ထြက်ရွိမျွာဖစ္တယ္လို့သိရွိရပါတယ်။ အကယ္ဒမီ အျိန္ဒာကေ်္ဇာင္က ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရွင္ထဲမွာ ခ်မ်းသာကြယ်ဝတဲ့ အမ်ိုးသမီးတစ်ဦးအေနနဲ့ ပါဝင္ထာျးပီး အကယ္ဒမီ ထြန်းအျိန္ဒာဗိုလ္နဲ့ အျပိုင်သရုပ္ထားတယ် လို့လဲသိရပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်း ရုပ်ရွင္ဇာတ္ကားကြီးကို လာမယ့် ဂ်ူလိုင်(၁၈)ရက်နေ့မွာ ရုံတင်ျပမျွာဖစ္တဲ့အတြက် ဘယ္လိုဆြဲဆောင္မှုတြေ ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအုံး ပရိသတ်ကြီး။
ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေး Elly Tran အကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အချက်(၈)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေရိုက်ခဲ့တဲ့ စိမ်းစိုနေတဲ့ ရှုခင်းကြီးကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ထားပါတယ်…